Unyaka omtsha waseTshayina kunye namalungiselelo eeholide
Unwabile uNyaka oMtsha waseTshayina 1) Iholide yomnyhadala waseTshayina iya kuba yiholide yethu ukusuka ngoFebruwari 9 ukuya ku-17, 2021. Ukuba unayo nayiphi na imfuneko, ungasithumela i-imeyile stone@dflstones.com ukuba ungxamiseko ungasitsalela umnxeba 0086-13931853240 Umbala we-Wang 2) Bhiyozela unyaka wethu omtsha waseTshayina ...
Ikrismesi emnandi mhlobo wam, Sele kuphakathi kuDisemba. Ngaba ikrisimesi ikude? Phambi kokuba kufike iKrisimesi, sikunqwenelela ukungxama kwaye sikunqwenelela umsebenzi owonwabisayo kunye nosapho olonwabileyo kunyaka omtsha Enkosi ngokusibonisa kwakho kwaye sinethemba lokuba siza kuphinda sitshintshisane ngo-2021. Masithethe ...
Kwilitye lembonakalo yomhlaba, abayili bathandana nobugcisa bendalo kunye nobugcisa bamatye. Ukuqala kokulula kobuso bokwaphuka kunye nepateni yendalo kuyaphula ukuqhubeka kwentsusa, okuzisa ifuthe elibonakalayo kunye nefuthe elingalindelekanga. Ubugcisa bendalo Umphezulu wendalo welitye luhlobo ...
Ngaba asilunganga xa sijongana neziphene zamatye?
Umhlobo wam wakhe wandibuza ukuba ndidiniwe kakhulu xa bendisebenza kwimveliso kunye nasekwenzeni amashishini amatye ngaphezulu kweminyaka engama-20? Impendulo yam ngu-ewe, "ndidiniwe, andidinwanga ngokubanzi, kodwa ndidiniwe kakhulu." Isizathu sokudinwa ayinguye umsebenzi onzima kunye nobunzima, kodwa uthotho o ...
Phantsi kwemeko yobhubhane kwihlabathi ngo-2020
Kutshanje, imeko yobhubhane eTshayina iye yaphantsi kolawulo, kodwa imeko yobhubhane kwihlabathi liphela ikhawulezile ukusasazeka. I-United States, i-Russia, i-Bhritane, i-Italiya kunye namanye amazwe anemizi-mveliso ziye zaba zezona ndawo zichaphazeleka kakhulu. Okwangoku, inani confir phesheya ...